Foto dị ịtụnanya kwesịrị egwu egwu na-adọrọ adọrọ, Sony TV bụ mmetụta ụda - 【Tụnyere】 2022
Onyonyo mara mma kwesịrị ụda egwu dị egwu, Sony TV bụ mmetụta dị mma
Okwu m nke ezigbo onyonyo / kaadị GEU / 400 nwere ezigbo onyonyo / akwadoro ...
onyonyo 402; Ụdị 16 dị iche iche; Na kaadị laminated dị elu; Akwadoro maka ịrụ ọrụ na nsogbu nkwukọrịta
Ọtụtụ n'ime telivishọn ndị dị elu nke oge a nwere ihe nzuzo dị egwu: ha na-ada ụda egwu. Igwe onyonyo nwere teknụzụ ngosi kachasị elu nke a pụrụ ichetụ n'echiche na-enyekarị ogo ụda dị mma karịa onye na-ekwu okwu Bluetooth dị ọnụ ala, yabụ enyere ya na mgbe ịzụrụ TV ọhụrụ, ị ga-agbapụkwa maka ụlọ mmanya.
Ọ gwụla ma ị na-ege Sony TV dị ka Bravia XR OLED ma ọ bụ Bravia XR Master Series, n'ezie.
Sony kwenyere na telivishọn na-ada ụda dị mkpa dị ka ọdịdị ha, nke ahụ pụtara na e nwere ọtụtụ ihe ọhụrụ na teknụzụ ọdịyo nke telivishọn ha dị ka ọ dị na ihe ngosi dị ịtụnanya nke Sony. Ndị a bụ igwe onyonyo nke ịchọrọ ịhụ ma nụ.
1 Otu Sony si eme TV ọ ga-amasị gị ige ntị
2 Jiri ndị na-ekwu okwu TV mee ihe ndị ka mma
3 Ụdị iwu olu ọzọ
4 Ahụmahụ TV kacha mma
Otu Sony si eme TV ọ ga-amasị gị ige ntị
Sony maara otu ihe ma ọ bụ abụọ gbasara ọdịyo: Aha ya sitere na okwu Latin maka "ụda," o mere Walkman akara ngosi na 1979, ọ nọkwa na mbụ nke teknụzụ ọdịyo ruo ọtụtụ iri afọ. Ahụmahụ ahụ niile dị na Sony TV gị.
Ebumnobi Sony bụ imikpu gị n'ime ọdịyo kachasị mma enwere ike, ọ na-eme ya n'ụzọ dị iche iche dabere na teknụzụ nke telivishọn gị.
Otu n'ime nsogbu na ihe onyonyo onyonyo bụ na ka enyo na-ebuwanye ibu, ebe dị n'etiti ndị na-ekwu okwu na-abawanye. Ya mere na ihuenyo ruru 60, 70, ma ọ bụ ọbụna 80 inch, ọ na-esiwanye ike karị iji nhazi ọkà okwu ọdịnala napụta ụda na-ekwenye ekwenye. .
Sony ejirila amamihe dozie nsogbu a na TV OLED ya site na iji ihe ọ na-akpọ Acoustic Surface Audio +.
Acoustic Surface Audio + na-agbanwe nke ọma OLED panneau panel nke televiseur ka ọ bụrụ haut-parleur, dị egwu iji mepụta ụda na nkọwa zuru oke nke na-apụta site na nnọkọ ndị akọwapụtara maka cran iji kparịta ụka wee si na endroit ma ọ bụ trouve na-emegharị ya.
Nke a bụ nnukwu subwoofers dị n'ime na-akwado nke a iji wepụta arụmọrụ dị ala dị ala yana ọnụnọ niile ịchọrọ maka egwuregwu ihe nkiri na-egbochi abalị ma ọ bụ egwuregwu atọ. Ọ bụ ahụmịhe ọdịyo dị ịtụnanya n'ezie yana pụrụ iche na TV OLED sitere na Sony.
(Ebe E Si Nweta Foto: Sony)
Jiri ndị na-ekwu okwu TV mee ihe ndị ka mma
Na LED na LCD TV, Sony ga-ewere ụzọ dị iche; Teknụzụ ngosi ndị a nwere ọkụ azụ na-eme ka ọ ghara ikwe omume iji otu Acoustic Surface Audio + nke ị ga-ahụ na Sony OLED.
Ya mere, Sony ewepụtala sistemụ ọdịyo ọzọ akpọrọ Acoustic Multi Audio.
Kama ịkwado ndị ọkà okwu n'aka ekpe na aka nri nke panel, Sony na-eji ọtụtụ ndị na-ekwu okwu gburugburu TV.
Ọnụ ọgụgụ na ntụziaka nke ndị na-ekwu okwu na-adabere na otu ụdị, ma dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịnwe ndị na-ekwu okwu anọ n'ihu na elu na ala nke TV, ụda abụọ na-etinye tweeters n'azụ, na tweeter etiti. wepụta ụda kpụ ọkụ n'ọnụ, nkọwa zuru ezu na kpomkwem maka egwu, ihe nkiri na egwuregwu.
Dị ka Acoustic Surface Audio +, Acoustic Multi Audio dị naanị na Sony TV.
Ụdị iwu olu ọzọ
Sony TV nwere njirimara ọdịyo ọzọ bara uru: mbugharị olu. Na-akwalite ụda iji mee ka olu doo anya ma na-arụ ọrụ n'ụdị ọdịnaya niile - dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịchọ ịkwalite ụda ezinụlọ gị na vidiyo ụlọ ka mkpọtụ, ndabere, ma ọ bụ ị nwere ike ịkwalite ụda ahụ ka ị ghara' Echefula ihe nzuzo a na-amanye n'ime ihe nkiri ma ọ bụ njakịrị n'ihe nkiri juru ebe niile.
N'adịghị ka ụfọdụ nhazi ụda olu ndị asọmpi, nke a abụghị ihe nrịbawanye ugboro na-esi ike - ọ na-enyocha nke ọma ọwa ọdịyo iji gbasaa ma ọ bụ bee kpọmkwem ụda na-enweghị emetụta ụda ndị ọzọ.
Nke a pụtara na ị ka na-enweta ahụmịhe ọdịyo dị egwu na-enweghị atụ mgbe ị na-edozi ya ka ọ dabara na mmasị gị.
Ahụmahụ TV kacha mma
Mgbe ịzụrụ Bravia XR TV, ọ bụghị naanị na ị ga-enweta nnukwu TV. Ị ga-enwetakwa usoro ụda dị ịtụnanya.
N'iji teknụzụ dị ka Acoustic Surface Audio +, Acoustic Multi Audio, na Zoom Voice, Sony emepụtala ahịrị igwe onyonyo nke ga-amasị gị ige ntị na ikiri.
Onyonyo na-enweghị atụ kwesịrị ụda egwu dị egwu, nke ahụ bụkwa ihe Sony TV na-ebuga.
Chọpụta ihe gbasara TV 2021 nke Sony yana otu ha si ejikọta ogo onyonyo dị ịtụnanya na ụda mara mma iji wepụta ahụmịhe TV dịka ọ nweghị ọzọ.